Madaxweynaha oo ka tacsiyeeyay geerida Xildhibaan Xuseen Bantu – Radio Muqdisho
06 April 2015, Muqdisho: Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa tacsi u direy qoyskii, eheladii iyo shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Allah u naxariistee Marxuum Xuseen Maxamuud Muuse (Xuseen Bantu) oo ka tirsanaa Baarlamanka Federaalka.
‘’Innaa Lillaahi waa Innaa Ileyhi Raajicuun. Marxuumka Allah u naxariisto. Waxaa uu ahaa nin waddankiisa u soo shaqeeyay, mar walbana ku haminayey inuu arko Soomaaliya oo mideysan, nabad ah, kana soo kabatey burburkii ku dhacay. Waxaa uu ahaa nin si wanaagsan uga dhex muuqdey baarlamanka iyo arrimaha siyaasadda dalka’’.
Marxuum Xuseen Maxamuud Muuse (Xuseen Bantu), waxaa uu shaley ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaalla magaalada Muqdisho.
Waxaa marxuumka uu horey u soo noqdey Wasiirka Xanaanada Xoolaha, Kaluumeysiga iyo Bay’adda xiligii dowladaha ku meel gaarka ee Soomaaliya.
Shirka Wasiirada Isboortiga ee Urur Goboleedka IGAD oo ka furmay Jabuuti
Kulan looga hadlayay wax u qabashada bulshada Degmada Buurhakaba oo lagu qabtay Muqdisho "SAWIRRO"